Fantasy – Categories – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Sherlock (2010) Season4Complete Unicode Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ့ Sherlock အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Series လေးကိုမကြည့်ဖူးရင်တောင်ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်တွေရယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းချက်တွေအရ imdb 9.1 ကို လူပေါင်း ၈သိန်းကျော် Vote ပီးရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကော ကြည့်ပီးပီမမှတ်မိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ကြည်ကြည့်လင်လင်လေးပြန်ကြည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပီး Channel M-Sub ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ရဲ႕ Sherlock အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ Series ေလးကိုမၾကည့္ဖူးရင္ေတာင္ၾကားဖူးမယ္ထင္ပါတယ္။ သူရဲ႕သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းခ်က္ေတြရယ္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ေကာင္းခ်က္ေတြအရ imdb 9.1 ကို လူေပါင္း ၈သိန္းေက်ာ္ Vote ပီးရထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္. မၾကည့္ရေသးတဲ့သူေတြေကာ ၾကည့္ပီးပီမမွတ္မိေတာ့တဲ့သူေတြအတြက္ေကာ ၾကည္ၾကည့္လင္လင္ေလးျပန္ၾကည္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ဘာသာျပန္ပီး Channel M-Sub ကေနတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ Series ကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ May ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
TMDb: 8.5/10 3083 votes
Sherlock (2010) Season4Complete
Good Omens (2019) Season1 Complete Unicode ယခု Series လေးကို Terry Pratchett နဲ့ Neil Gaiman တို ရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Good Omens ဝတ္ထုကို သရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ Good Omens ဟာ ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေကို စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့စီးရီးတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းဆိုက်မယ့်အရေးကို ပူးပေါင်းကာကွယ်ကြမယ့် တမန်တော်တစ်ပါးနဲ့ နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး ခပ်နှောင့်နှောင့်ဟာသလေးတွေ နှောထားတာကြောင့် တစ်မူထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်ပုံကို ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။ အလင်းနဲ့အမှောင်ကြားက စည်းပါးပါးလေးအကြောင်း တွေးစရာရစေတဲ့အပြင် တမန်တော်နဲ့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာဦးရန်သူတော်နှစ်ယောက်ကြားက သံယောဇဉ်ကိုလည်း ချစ်စရာကောင်းအောင် ပုံဖော်ထားတာမို ပရိသတ်သဘောကျလိမ့်မယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်။ Credit Review ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Lut Lat Aung ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ယခု Series ေလးကို Terry Pratchett နဲ႔ Neil Gaiman တို ေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ...
TMDb: 8/10 866 votes
Good Omens (2019) Season1 Complete
Stranger Things (2016) Season2Complete Unicode imdb 8.7 ရှိပီး Netflix ရဲ့ Series ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stranger Things ကိုမကြည့်ရသေးသူတွေကော ကြည့်ပီးသားကိုမှပြန်ကြည်ချင်သူတွေအတွက်ကော Blu-ray အကြည်လေးပြန်ကြည့်လိုချင်သူတွေအတွက် Channel M-Sub ကနေ ဘာသာပြန်ပီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သည်းထိတ်ရင်ဖို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီ Series လေးကမဖြစ်မနေကြည့်ချင်တဲ့ Series လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီ Season ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ CoConut ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi imdb 8.7 ရွိပီး Netflix ရဲ႕ Series ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Stranger Things ကိုမၾကည့္ရေသးသူေတြေကာ ၾကည့္ပီးသားကိုမွျပန္ၾကည္ခ်င္သူေတြအတြက္ေကာ Blu-ray အၾကည္ေလးျပန္ၾကည့္လိုခ်င္သူေတြအတြက္ Channel M-Sub ကေန ဘာသာျပန္ပီးျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သည္းထိတ္ရင္ဖို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဇာတ္လမ္းေတြကို ႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီ Series ေလးကမျဖစ္မေနၾကည့္ခ်င္တဲ့ Series ေလးျဖစ္ပါတယ္ ဒီ Season ကို ဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ CoConut ...
TMDb: 8.6/10 8451 votes
Stranger Things (2016) Season2Complete
The Originals (2013) Season5Complete Unicode The Originals ဆိုတဲ့ TV Series တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ Vampire Diaries တို့ Vampire ဇာတ်လမ်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေက The Originals ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပါ .. Vampire Diaries ထဲမှာဆိုရင်လည်း စာဗေတွိုင်းညီနောင်တွေထက် ကြမ်းတဲ့ Original Vampire တွေရှိပါတယ် Klaus တို့ မိုက်ကယ်လ် တို့ပေါ့ သူတို့က Vampire တွေရဲ့ မူလအစပေါ့ .. ခု Series က Vampire တွေရဲ့ မူလအစ တွေရဲ့ Series .. သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ Vampire တွေကို တွေ့ရမှာပါ .. ဒီ Series ကို ရိုက်ကူးပေးထားတာက Julie Plec ပါ ...
TMDb: 8.6/10 2269 votes
Ghost Whisperer (2005) Season2Unicode ငယ်တုန်းက DVD စက်တွေနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer လေးကို Channel M-SUB ကနေပြန်ပီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ တော်တော်များများသိကျတဲ့အတိုင်း မင်းသမီးက သေဆုံးပီးဖြစ်တဲ့သူတွေကို မြင်ရပီး သူ့တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ တွေကိုဖြည့်စီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ? သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျန်ရစ်သူတွေကို ဘယ်လို Message တွေပေးချင်ကျတာလဲ ? ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုကကော သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအပေါ် ဘာတွေပြောချင်ကျလဲ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ဖူးသူတွေကော ကြည့်ဖူးပီး Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ပါ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Lucas Wang ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ငယ္တုန္းက DVD စက္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer ေလးကို Channel M-SUB ကေနျပန္ပီးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိက်တဲ့အတိုင္း မင္းသမီးက ေသဆုံးပီးျဖစ္တဲ့သူေတြကို ျမင္ရပီး သူ႔တို႔ရဲ႕ ...
TMDb: 7.9/10 856 votes
Girl from Nowhere (2018) Season2Complete Unicode Netflix ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Girl From Nowhere မှာတော့ Nanno ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူလေးက အဓိက ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Series ဆိုပေမယ့် episode တစ်ခုချင်းစီက အကြောင်းအရာက တစ်မျိုးစီမို့ ရသာမျိုးစုံ ခံစားရမွာပါ။ Series ရဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ Nanno ဟာ episode တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းသူအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းစတာပါ။အဓိက ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာကတော့ အထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဘ၀ကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းဆိုတာလူကြီးတွေအမြင်မှာအပြစ်ကင်းစင်ပြီးပညာရှာဖို့လောက်ပဲသုံးတဲ့နေရာလို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့အဲ့ထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါ။ရည်းစားကိစ္စတွေရှိမယ်။ မနာလိုတာတွေရှိမယ်။ နှာဘူးကျတဲ့ကျောင်းဆရာတွေရှိမယ်။ ဇီဇာကြောင်ပြီးတအားစိတ်ဖိစီးနေတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းဆရာမတွေ၊single momတွေရှိမယ်။ လိင်ကိစ္စစူးစမ်းချင်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေရှိမယ်။အသိုင်းအဝိုင်းဆင်းရဲတာကိုဖုံးကွယ်ပြီးချမ်းသာချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်လူတစ်ချို့ရှိမယ်။လာဘ်စားတဲ့ လူတန်းစားတွေရှိမယ်။ geniusတွေစုနေတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကပုံမှန်ဖြစ်နေလို့အားငယ်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်။ အလှအပအရမ်းပြိုင်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပေါ့။ Series တစ္ခုလုံးကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်၊ dark side ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ပြထားတာပါ။ သရဲကား၊ လူသတ္ကား မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်နေရင် ငါ့ဘေးနားက လူတွေကော အဲ့လိုလူတွေများ ရှိနေမလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ အထိ အရသာ ပေးစွမ်းနိုင်မှာ အေသအခ်ာပါပဲ။ Credit Review ဒီ Series ...
TMDb: 9/10 29 votes
Girl from Nowhere (2018) Season 1 Complete Unicode Netflix ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Girl From Nowhere မှာတော့ Nanno ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူလေးက အဓိက ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Series ဆိုပေမယ့် episode တစ်ခုချင်းစီက အကြောင်းအရာက တစ်မျိုးစီမို့ ရသာမျိုးစုံ ခံစားရမွာပါ။ Series ရဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ Nanno ဟာ episode တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းသူအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းစတာပါ။အဓိက ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာကတော့ အထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဘ၀ကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းဆိုတာလူကြီးတွေအမြင်မှာအပြစ်ကင်းစင်ပြီးပညာရှာဖို့လောက်ပဲသုံးတဲ့နေရာလို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့အဲ့ထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါ။ရည်းစားကိစ္စတွေရှိမယ်။ မနာလိုတာတွေရှိမယ်။ နှာဘူးကျတဲ့ကျောင်းဆရာတွေရှိမယ်။ ဇီဇာကြောင်ပြီးတအားစိတ်ဖိစီးနေတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းဆရာမတွေ၊single momတွေရှိမယ်။ လိင်ကိစ္စစူးစမ်းချင်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေရှိမယ်။အသိုင်းအဝိုင်းဆင်းရဲတာကိုဖုံးကွယ်ပြီးချမ်းသာချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်လူတစ်ချို့ရှိမယ်။လာဘ်စားတဲ့ လူတန်းစားတွေရှိမယ်။ geniusတွေစုနေတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကပုံမှန်ဖြစ်နေလို့အားငယ်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်။ အလှအပအရမ်းပြိုင်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပေါ့။ Series တစ္ခုလုံးကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်၊ dark side ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ပြထားတာပါ။ သရဲကား၊ လူသတ္ကား မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်နေရင် ငါ့ဘေးနားက လူတွေကော အဲ့လိုလူတွေများ ရှိနေမလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ အထိ အရသာ ပေးစွမ်းနိုင်မှာ အေသအခ်ာပါပဲ။ Credit Review ဒီ Series ...
Girl from Nowhere (2018) Season 1 Complete
Times (2021) Complete Unicode စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ သူမတူတဲ့အရည်အချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သတင်းထောက်လီဂျင်ဝူး(Lee Seo Jin)ဟာ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို အမှန်တရားဖော်ထုတ်ခြင်းမှာပဲ မြှုပ်နှံထားသူပါ… အမှန်တရားသာပေါ်လာမယ်ဆို ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲပါစေ အဆုံးထိရှာဖွေဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သူမျိုး… သတင်းအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းကြိုးစားလွန်းတဲ့ ဂျင်ဝူးရဲ့ဘဝဟာ နောက်၅နှစ်အနာဂတ်ကပါလို့ပြောလာတဲ့ ဆောဂျောင်အင်(Lee Joo Young)ဆီက ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်~~~ ဆောဂျောင်အင်ဟာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ချက်ကျလက်ကျဖန်တီးနိုင်တဲ့ passionအပြည့်နဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတလေများ သတင်းတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်တူးဆွမိလိုက်ရင် မနှစ်မြို့စရာအမှန်တရားတွေအထိ ဖော်ထုတ်နိုင်သူ… သိလာရတဲ့သတင်းအစအနလေးတွေကတစ်ဆင့် ဂျောင်အင်ဟာ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲတွေကို တုန်လှုပ်သွားစေနိုင်တဲ့ သူတို့တွေရဲ့မကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေကိုပါ တွေ့လာရတဲ့အခါ သမ္မတဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့အဖေနဲ့ သူမကိုယ်တိုင် အန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့ကစားပွဲထဲ ဝင်ပါမိသွားပါတော့တယ်။ ဒီကစားပွဲအတွက် ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ ဖုန်းချင်းချိတ်မိသွားတဲ့ လီဂျင်ဝူးနဲ့အင်အားချင်းပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ အရမ်းနောက်မကျခင်မှာ ကြိုးကိုင်သူတွေစီစဉ်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မှုခင်းတွေဖြစ်လာမှာကို တားဆီးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ~~~ Credit Review Zawgyi စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ သူမတူတဲ့အရည္အခ်င္းေတြပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ သတင္းေထာက္လီဂ်င္ဝူး(Lee Seo Jin)ဟာ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကို အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာပဲ ျမႇဳပ္ႏွံထားသူပါ… ...
Awaken (2020) Complete Unicode မင်းသား Nam Goong Min ဟာ Hot Stove League (၂၀၁၉) နဲ့Doctor Prisoner(၂၀၁၉)တို့မှာ Ro ခန်းမပြောနဲ့ မင်းသမီးကို ချစ်တဲ့ဟန်အမူအရာလုံးဝမပါဘဲ ပွဲပတ်ကြမ်းနေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကိုရီးယားစီးရီး(၂)ခုမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသားအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာပါ....ဂျစ်ကန်ကန် မထေမဲ့မြင်အပြုံးနဲ့ တစ်ဘက်သားကို ထိုးနှက်ဖို့ စကားလုံးလှလှတွေသုံးရင်း ထက်မြက်လှတဲ့ သူ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ ရန်သူကို အနိုင်တိုက်တတ်တဲ့ ဒီဟန်အမူအရာတွေကြောင့် အဆင်ငမ်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေတောင် ကြွေခဲ့ပါတယ်..... ဒီစီးရီးထဲမှာလည်း နှုတ်ခမ်းမွေးစစ ပေစုတ်စုတ်နဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ စုံထောက်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်.... အပိုင်း(၁)မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်က အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေတဲ့ မှုခင်းကြီးတစ်ခုကိုပြထားပြီးနောက် ဓားပြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ ကို Nam Goong Min တို့ရဲစုံထောက်တွေလိုက်ဖမ်းတာနဲ့စထားပါတယ်.... ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ စီးရီး(၂)မှာတင် လုံးဝသဘောကျခဲ့တာမို့ ဒီစီးရီးမှာလည်း လန်းဖို့များပါတယ်...သူနဲ့အလိုက်ဆုံး စရိုက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ တော်တော်လည်း အထှာကျပါတယ်..ပြီးတော့ ဘက်ဂျက်အများကြီးသုံးထားပုံရပါတယ်.. ရိုက်ထားတာတွေလည်း တော်တော်မိုက်ပါတယ်. စုံထောက် ၊အက်ရှင်၊ မှုခင်းကားတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေအဖို့ ရော Nam Goong Min ဖန်တွေအတွက်ရော ခံစားကြည့်ကြပါဉီး..... Credit ...
Awaken (2020) Complete
L.U.C.A.: The Beginning (2021) Complete Unicode Ji Oh ဆိုတဲ့အမျိုးသားက သူ့ခံစားချက်တွေကို သူများတွေဆီထုတ်ပြခဲတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိပါဘူး သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က မေးခွန်းပေါင်းများစွာကိုအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားရင်း ပဟေဠိဆန်သောလူတွေရဲ့ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပါတော့တယ် Gu Reumဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ သူလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကို ပြီးဆုံးသည်အထိလုပ်ဆောင်တတ်သူပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနှစ်ပါးကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီး သူကြီးလာတော့ စုံထောက်ဖြစ်တဲ့အခါ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုနောက်ကွယ်က အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ စုံထောက် Gu Ruemတစ်ယောက် ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားပိုင်ရှင် Ji Ohနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ သူမဘဝကစတင်ပြောင်းလဲပါတော့တယ်… LUCA ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ မင်းသားJi Ohအနေနဲ့ Kim Rae-Wonက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး စုံထောက်မလေးGu Ruemနေရာမှာတော့ မင်းသမီး Lee Da-Heeက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ အမိုက်စားဇာတ်ကွက်တွေကို လက်မလွှတ်တမ်းရှုစားကြပါဦး။ Credit Review Zawgyi Ji Oh ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသားက သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကို သူမ်ားေတြဆီထုတ္ျပခဲတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔မွာထူးျခားတဲ့စြမ္းအားနဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုရွိေပမဲ့ သူ႔ကိုယ္သူဘယ္သူလဲဆိုတာကို သူကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိပါဘူး သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုအေျဖရွာဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ပေဟဠိဆန္ေသာလူေတြရဲ႕ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံရပါေတာ့တယ္ Gu Reumဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ သူလုပ္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အရာတစ္ခုကို ၿပီးဆုံးသည္အထိလုပ္ေဆာင္တတ္သူပါ။ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘႏွစ္ပါးကေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ရၿပီး သူႀကီးလာေတာ့ စုံေထာက္ျဖစ္တဲ့အခါ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးမႈေနာက္ကြယ္က အမွန္တရားကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ စုံေထာက္ Gu Ruemတစ္ေယာက္ ထူးျခားတဲ့စြမ္းအားပိုင္ရွင္ Ji Ohနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ သူမဘဝကစတင္ေျပာင္းလဲပါေတာ့တယ္… LUCA ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲမွာေတာ့ မင္းသားJi Ohအေနနဲ႔ Kim ...
American Gods (2017) Season 1 Complete Unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရှဲဒိုးမွန်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ထောင်ထဲက ထွက်လာပြီး မိန်းမဆီကို ပြန်မယ့်နေ့မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ လေဆိပ်မှာ စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူကြီးဟာ သူ့ဘဝအကြောင်းကို ထူးထူးဆန်းဆန်းသိနေပြီး သူ့ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရှဲဒိုးမွန်းနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့ လူကြီးတို့ အတူခရီးထွက်ရင်း ရှဲဒိုးမွန်းတစ်ယောက် သူမသိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက ထူးဆန်းမှုမျိုးစုံနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ.... Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tracy ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ရွဲဒိုးမြန္းဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေထာင္ထဲက ထြက္လာၿပီး မိန္းမဆီကို ျပန္မယ့္ေန႔မွာပဲ ထူးဆန္းတဲ့ လူႀကီးတစ္ဦးနဲ႔ ေလဆိပ္မွာ စေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီလူႀကီးဟာ သူ႔ဘဝအေၾကာင္းကို ထူးထူးဆန္းဆန္းသိေနၿပီး သူ႔ကို အလုပ္လုပ္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ရွဲဒိုးမြန္းနဲ႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္းမသိတဲ့ လူႀကီးတို႔ အတူခရီးထြက္ရင္း ရွဲဒိုးမြန္းတစ္ေယာက္ သူမသိတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲက ထူးဆန္းမႈမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကဳံလာရတဲ့အခါ.... Credit Review ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Tracy ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Episode 1 Server M-File Episode2Server M-File Episode3Server M-File Episode4Server M-File Episode ...
TMDb: 7.1/10 961 votes
Moon Lovers: Scarlet Heart: Ryeo (2016) Complete Unicode ၂၁ ရာစုက ကောင်မလေး.. ဂိုဟေဂျင်း ( IU ) ဟာ ကလေးတစ်ယောက်ရေနစ်တာကိုဆင်းကယ်တဲ့အချိန် ... ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေကြတ်ခြင်းဖြစ်ပွားသွားပြီး ... ၉၁၈ ခုနှစ် ထယ်ဂျိုဘုရင်လက်ထက် ဂိုလျောခေတ် ရဲ့ ဆုန်းဒက်ပြည်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် .. ဟေဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအဖြစ်နဲ့ မင်းသားတွေရေချိုးနေတဲ့ ရေကန်ထဲမှာ ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါ.. ငယ်ငယ်ချောချော မင်းသားလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြသနာတွေဖြစ်ကြမလဲ..... အဲ့မင်းသားတွေထဲကမှ.မျက်နှာတစ်ခြမ်းကိုဖုံးထားတဲ့ လေးယောက်မြောက် မင်းသားဝမ်ဆို...( Lee-Joon Gi) မြေခွေးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လူတိုင်းကကြောက်ရတဲ့ မင်းသားနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး မေတ္တာသက်ဝင်သွားမှာလဲ..... ချောမောတဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ... နန်းတွင်း ထီးနန်းလုတဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကြားမှာ ... ဟေဆိုးတစ်ယောက်ဘယ်လို ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ..... Credit Review Zawgyi ၂၁ ရာစုက ေကာင္မေလး.. ဂိုေဟဂ်င္း ( IU ) ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ေရနစ္တာကိုဆင္းကယ္တဲ့အခ်ိန္ ... ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္ပြားသြားၿပီး ... ...
TMDb: 8.1/10 46 votes
Tale of the Nine Tailed (2020) Complete Unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Tale of nine tailed ဆိုတဲ့ fantasy ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက အမြီးကိုးချောင်းပါမြေခွေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သွေးသားဆာလောင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ အပြစ်မဲ့လူတွေကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်တဲ့ ပုံပြင်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ သရဲတစ္ဆေပုံပြင်တွေကို ယုံကြည်တဲ့သူနည်းပေမယ့် Nam Ji-A လိုမျိုး ဒီပုံပြင်တွေမှာ စိတ်ကူးယဉ်ထက် အမှန်တရားတွေ ပိုများနိုင်တယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီနဲ့ ပုံပြင်တွေထဲ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ဂျီအာဟာ တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ် ထက်သန်တဲ့ဇွဲတွေနဲ့ Ji-A ဟာ ရှားပါး ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီအရာနောက်လိုက်ရင်း Ji-A ဟာ ချောမောခံ့ညားပြီး ထက်မြက်တဲ့ Lee Yeon နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာထက် မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေက အများကြီးရှိမှန်းသိလာခဲ့တဲ့ Ji-A... သူ့ကို အနီးကပ် ...
TMDb: 8.8/10 74 votes
ALICE (2020) Complete Unicode မိုးသည်းတဲ့ညတစ်ညမှာ ပါရဂူတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကို လုပ်ကြံရေးသမားတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်… ဒီလူက ပါရဂူဆီကနေ ထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ယူပြီး ပါရဂူကိုသတ်ပစ်လိုက်တယ်…. အားလုံးလက်စသတ်မယ့်အချိန်မှာ နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့လင်မယား(၂)ဉီးရောက် လာပြီးလုပ်ကြံရေးသမားကို သတ်ပြီး စာအုပ်ကိုဆက်လုသွားတယ်…ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိခါစ ဇနီးဖြစ်သူဟာ သူတို့လင်မယားအတွက်အနာဂတ်စိတ်ကူးအချို့ကို ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ကြံလိုက်ပုံပါပဲ.. ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစေချင်တဲ့ ယောင်္ကျားကိုထားခဲ့ပြီး လုလာတဲ့ စာအုပ်ကို ယူခါ တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တဆိတ်ကလေးကို မွေးဖွားခဲ့တယ်…အဲ့ဒီနောက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါင်းများစွာဆက်ဖြစ်တော့တာပါပဲ… ဒီစီးရီးက မင်းသား Joo Woonနဲ့ မင်းသမီးချော Kim Hee Sunတို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်… အချိန်ခရီးသွားတွေ..အက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ စရိုက်ဆန်းဆန်းတွေနဲ့ စီးရီးရဲ့ဇာတ်အိမ်ကို ခပ်မိုက်မိုက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်… တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြင် သိပ္ပံခေတ်လွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေမို့ ဇာတ်လမ်းတွဲခပ်မိုက်မိုက်ကြိုက်သူတို့လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းပါရစေ… Credit Review Zawgyi မိုးသည္းတဲ့ညတစ္ညမွာ ပါရဂူတစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္ကို လုပ္ႀကံေရးသမားတစ္ေယာက္ဝင္လာတယ္… ဒီလူက ပါရဂူဆီကေန ထူးဆန္းတဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ယူၿပီး ပါရဂူကိုသတ္ပစ္လိုက္တယ္…. အားလုံးလက္စသတ္မယ့္အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္အထူးကြၽမ္းက်င္တဲ့လင္မယား(၂)ဉီးေရာက္ လာၿပီးလုပ္ႀကံေရးသမားကို သတ္ၿပီး စာအုပ္ကိုဆက္လုသြားတယ္…ဒီစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရွိခါစ ဇနီးျဖစ္သူဟာ သူတို႔လင္မယားအတြက္အနာဂတ္စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔ႀကံလိုက္ပုံပါပဲ.. ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေစခ်င္တဲ့ ေယာက်ၤားကိုထားခဲ့ၿပီး လုလာတဲ့ စာအုပ္ကို ယူခါ တစ္ေယာက္ထဲ တိတ္တဆိတ္ကေလးကို ေမြးဖြားခဲ့တယ္…အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ… ဒီစီးရီးက မင္းသား Joo Woonနဲ႔ မင္းသမီးေခ်ာ Kim Hee Sunတို႔အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတယ္… အခ်ိန္ခရီးသြားေတြ..အက္ရွင္ခန္းေတြနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ စ႐ိုက္ဆန္းဆန္းေတြနဲ႔ စီးရီးရဲ႕ဇာတ္အိမ္ကို ခပ္မိုက္မိုက္ဖြဲ႕စည္းထားတယ္… ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့အျပင္ သိပၸံေခတ္လြန္ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြမို႔ ဇာတ္လမ္းတြဲခပ္မိုက္မိုက္ႀကိဳက္သူတို႔လက္မလႊတ္သင့္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းပါရေစ… Credit ...
ALICE (2020) Complete
Goblin (2016) Complete Unicode ကင်ရှင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်း ကိုးရာကျော်တိုင်အောင်အသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့ မှင်စာတစ်ကောင်ပါ..သူ့လူဘဝတုန်းကတော့ သူဟာမတရားစွပ်စွဲခံရပြီး မင်းကြီးကသတ်လိုက်လို့သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သစ္စာရှိစစ်သူကြီးတစ်ဦးပေါ့..သို့ပေမယ့်လည်း သူသတ်ခဲ့တဲ့ရန်သူပေါင်းများစွာ ဒီအပြစ်တွေကြောင့် ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ကိုမှင်စာအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ပြီး ထာဝရအသက်ရှင်စေတဲ့ အပြစ်ကို ပေးလိုက်ပါတယ်.ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားတာတွေ..တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်မှုတွေကိုနာကျဉ်ခံစားစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ.. ဒါပေမယ့် ဒီကျိန်စာက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူသေဆုံးတုန်းက သူ့ရင်ဘတ်မှာစိုက်နေတဲ့ဓါးကို ဆွဲနှုတ်နိုင်တဲ့ မှင်စာရဲ့သတို့သမီးပေါ်လာမှသာလျှင်မှင်စာအဖြစ်မှာတောင်သူ့ရင်ဘတ်မှာစိုက်နေတဲ့ဓါးကို ဆွဲနှုတ်ပြီး ပြာအဖြစ်လောင်ကျွမ်းကာငြိမ်းချမ်းခွင့်ရမှာပါ..သူနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ သေမင်းတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်.. ကဲ..မှင်စာတစ်ယောက် သူ့သတို့သမီးကိုရှာနိုင်မလား..သူနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့သေမင်းနဲ့ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုတွေ..ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ Goblin ဆိုတဲ့စီးရီးတွဲလေးကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Credit Review Zawgyi ကင္ရွင္းဟာ ကမာၻေျမႀကီးေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ကိုးရာေက်ာ္တိုင္ေအာင္အသက္ရွင္လာခဲ့တဲ့ မွင္စာတစ္ေကာင္ပါ..သူ႔လူဘဝတုန္းကေတာ့ သူဟာမတရားစြပ္စြဲခံရၿပီး မင္းႀကီးကသတ္လိုက္လို႔ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့သစၥာရွိစစ္သူႀကီးတစ္ဦးေပါ့..သို႔ေပမယ့္လည္း သူသတ္ခဲ့တဲ့ရန္သူေပါင္းမ်ားစြာ ဒီအျပစ္ေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ကိုမွင္စာအျဖစ္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ထာဝရအသက္ရွင္ေစတဲ့ အျပစ္ကို ေပးလိုက္ပါတယ္.ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြကိုယ့္ကိုစြန႔္ခြာသြားတာေတြ..တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္မႈေတြကိုနာက်ဥ္ခံစားေစလိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ပါ.. ဒါေပမယ့္ ဒီက်ိန္စာက လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ သူေသဆုံးတုန္းက သူ႔ရင္ဘတ္မွာစိုက္ေနတဲ့ဓါးကို ဆြဲႏႈတ္ႏိုင္တဲ့ မွင္စာရဲ႕သတို႔သမီးေပၚလာမွသာလွ်င္မွင္စာအျဖစ္မွာေတာင္သူ႔ရင္ဘတ္မွာစိုက္ေနတဲ့ဓါးကို ဆြဲႏႈတ္ၿပီး ျပာအျဖစ္ေလာင္ကြၽမ္းကာၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရမွာပါ..သူနဲ႔အတူေနထိုင္တဲ့ ေသမင္းတစ္ေယာက္လည္းရွိပါတယ္.. ကဲ..မွင္စာတစ္ေယာက္ သူ႔သတို႔သမီးကိုရွာႏိုင္မလား..သူနဲ႔အတူေနထိုင္တဲ့ေသမင္းနဲ႔ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ..ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတဲ့ Goblin ဆိုတဲ့စီးရီးတြဲေလးကိုစိတ္ဝင္တစားၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။ Credit Review Quality - Web-dl 1080p Episode 1 Server MFile , Storage ...
TMDb: 8.7/10 852 votes
The Originals Season 1 Complete Unicode The Originals ဆိုတဲ့ TV Series တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ Vampire Diaries တို့ Vampire ဇာတ်လမ်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေက The Originals ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပါ .. Vampire Diaries ထဲမှာဆိုရင်လည်း စာဗေတွိုင်းညီနောင်တွေထက် ကြမ်းတဲ့ Original Vampire တွေရှိပါတယ် Klaus တို့ မိုက်ကယ်လ် တို့ပေါ့ သူတို့က Vampire တွေရဲ့ မူလအစပေါ့ .. ခု Series က Vampire တွေရဲ့ မူလအစ တွေရဲ့ Series .. သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ Vampire တွေကို တွေ့ရမှာပါ .. ဒီ Series ကို ရိုက်ကူးပေးထားတာက Julie Plec ...
TMDb: 7.6/10 459 votes
King Maker: The Change of Destiny (2020) Complete Unicode ကိုရီးယားနန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွေ နှစ်သက်သူတွေအတွက် Channel M-Sub ကနေ OnGoing ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကံကြမ္မာကို ကြိုဖတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်းကို အဓိကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးရဲ့အမေကို သတ်ဖို့လုပ်ခါနီးဆဲဆဲမှာ အရာရှိရဲ့ ကံကြမ္မာကိုဖတ်ပြလိုက်တဲ့နောက် မိန်းကလေးရဲ့ ဘ၀အခြေအနေပြောင်းလဲလာပုံတွေ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ခါနီး အကောက်ကြံခံရမူ့ကြောင့် ရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေအပြင် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၂၁ပိုင်းအထိရှိမှာဖြစ်ပီး ပြသနေဆဲဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြည်းဖြည်းခြင်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ ချက်ကြီး & Sakura ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ကိုရီးယားနန္းတြင္းဇာတ္လမ္းေတြ ႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ Channel M-Sub ကေန OnGoing ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ေလးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ ကံၾကမၼာကို ႀကိဳဖတ္ႏိုင္တဲ့ မိန္းကေလးအေၾကာင္းကို အဓိကတင္ဆက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိန္းကေလးရဲ႕အေမကို သတ္ဖို႔လုပ္ခါနီးဆဲဆဲမွာ အရာရွိရဲ႕ ကံၾကမၼာကိုဖတ္ျပလိုက္တဲ့ေနာက္ မိန္းကေလးရဲ႕ ဘ၀အေျခအေနေျပာင္းလဲလာပုံေတြ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔လက္ထပ္ခါနီး အေကာက္ႀကံခံရမူ႔ေၾကာင့္ ရွင္ကြဲကြဲခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြအျပင္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း ၂၁ပိုင္းအထိရွိမွာျဖစ္ပီး ျပသေနဆဲဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖည္းျဖည္းျခင္းတင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကို ...
King Maker: The Change of Destiny (2020) Complete
Blood (2015) Complete Unicode ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာတော့ ၂၀၁၅ ခုနစ်ထွက် သွေးနှောလူသားလို့နာ မည်ကြီးတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေ အဖြစ် Ahn Jae-Hyu, Back Seung-Hwan, Ji Jin-Hee, Ku Hye-Sun တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Vampire Action Drama ဇာတ်လမ်းအမျိုးစားလေးဖြစ်ပါ တယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ Vampire တွေအချင်းချင်း အဖွဲ့တွေ ကွဲနေပြီး အဖွဲ့ထဲကလူတစ်ယောက်ကသူ့မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ပေါင်းပြီး စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ဒီလို Vampire ဖြစ်နေတာကိုကုသဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခါနီးမှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုသတ်ပြစ်ခဲ့ကျတာပေါ့။ဒါပေမယ့်သူတို့မှာ သားတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သူကလဲ ဒီရောဂါကူးစက်နေပြီး ဒါကိုကုစားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရူပါလို့ညွန်းဆိုပါတယ်။ Credit Review Zawgyi ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးမွာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုနစ္ထြက္ ေသြးေႏွာလူသားလို႔နာ မည္ႀကီးတဲ့ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေလးျဖစ္ၿပီးအဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ အျဖစ္ Ahn Jae-Hyu, Back Seung-Hwan, Ji Jin-Hee, Ku Hye-Sun တို႔အဓိကပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ Vampire Action Drama ဇာတ္လမ္းအမ်ဳိးစားေလးျဖစ္ပါ တယ္။ဇာတ္လမ္းေလးမွာေတာ့ Vampire ေတြအခ်င္းခ်င္း အဖြဲ႕ေတြ ကြဲေနၿပီး အဖြဲ႕ထဲကလူတစ္ေယာက္ကသူ႕မိန္းမျဖစ္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒါကေတာ့ ဒီလို Vampire ျဖစ္ေနတာကိုကုသဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေအာင္ျမင္ခါနီးမွာပဲ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုသတ္ျပစ္ခဲ့က်တာေပါ့။ဒါေပမယ့္သူတို႔မွာ သားတစ္ေယာက္က်န္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္သူကလဲ ဒီေရာဂါကူးစက္ေနၿပီး ဒါကိုကုစားႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ဘာေတြဆက္ျဖစ္မွာလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုဆက္လက္ၾကည့္႐ူပါလို႔ၫြန္းဆိုပါတယ္။ Credit Review Quality 1080p Episode 1 Google Drive , Storage M-Sub , ...
TMDb: 7.9/107votes